ကစားပေးချင်တဲ့ အိပ်မက်အသင်း6သင်း အမည်ကို ဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့ လက်စတာ ကြယ်ပွင့် ဖိုဖာနား - xyznews.co
ကစားပေးချင်တဲ့ အိပ်မက်အသင်း6သင်း အမည်ကို ဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့ လက်စတာ ကြယ်ပွင့် ဖိုဖာနား
လက်စတာ စီးတီး အသင်းရဲ့ လူငယ် ကြယ်ပွင့် နောက်ခံလူ ဖြစ်တဲ့ ဝက်စ်လေ ဖိုဖာနားက သူ့ရဲ့ အိပ်မက် အသင်းတွေထဲ မန်ချက်စတာ မြို့ခံပြိုင်ဖက် အသင်း နှစ်သင်း ဖြစ််ကြတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ မန်စီးတီး အသင်းတို့ ပါဝင်နေကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားသွားခဲ့လိုက်ပါတယ် ။
အခုတော့ အသက် 20 ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဖိုဖာနားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီတုန်းက လက်စတာ စီးတီး အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး အသင်းမှ ထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့ ဗဟို နောက်ခံလူ ဟယ်ရီ မက်ဂွားယားရဲ့ နေရာကို အစားထိုးဖို့ ရောက်လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
သူဟာ ပထမဆုံး ဘောလုံး ရာသီမှာပဲ အသင်းရဲ့ ပရိသတ််တွေ မက်ဂွားယားကို မေ့ပျောက်လို့ ရနိုင်လောက်ခဲ့တဲ့ အထိ အထူး ခြေစွမ်းကောင်းတွေ ပြသွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ထိပ်သီး အသင်းတွေက သူ့ကို စိတ်ဝင််စား ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ နွေတုန်းက ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ဖက် အသင်းတွေ ဗဟို ခံစစ် ကစားသမား တစ်ဦးကို လိုချင်နေခဲ့ကြချိန်် ဖိုဖာနားဟာ ယူနိုက်တက် ၊ မန်စီးတီး အသင်းတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်် ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ အပြောင်းအရွှေ့ မဖြစ်ပွားခဲ့ပါဘူး ။
အခုတော့ သူ ပြောင်းရွှေ့ ကစားပေးလိုတဲ့ အိပ်မက် အသင််းတွေ အကြောင်း အမေးခံလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဖိုဖာနား က အသင်း6သင်း အမည်ကို ထုတ်ဖော် ပြောပြ သွားခဲ့လိုက်ပြီး မန်ချက်စတာ နှစ်သင်းကိုပါ ထည့်သွင်း ဖော်ပြ သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” ကျွန်တော့်ကို အိပ်မက်တွေ မက်စေတဲ့ အသင်း တစ်သင််းလား ? ကျွန်တော့် အတွက်တော့ မာဆေးလ် ၊ ရီးယဲ မက််ဒရစ် ၊ ဘာစီလိုနာ အသင်းတွေ ပါပဲ ။ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာတော့ ချဲလ်ဆီး ၊ ယူနိုက်တက် နဲ့ မန်စီးတီး အသင်းတွေပေါ့ဗျာ ”
” ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အမှန်တကယ် ဖြစ်စေနိုင်ဖို့ အတွက် အလုပ်တွေတော့ အများကြီး လုပ်ရမှာ အသေအချာ ပါပဲ ။ အလုပ်တွေကိုသာ ကြိုးစားသထက် ကြိုးစား အားထုတ်နေမယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ အရာရာတိုင််းကို ရနိုင်မှာပါပဲ ”
” မာဆေးလ် အတွက် တစ်ရက် ကစားရဖို့လား ? ကျွန််တော်တို့ စောင့်ကြည့်ကောင်း စောင့်ကြည့်ကြရတာပေါ့ဗျာ ။ ကျွန်တော်ဟာ ငယ်စဥ် မွေးကတည်းက မာဆေးလ် ပရိသတ် ဖြစ်လာခဲ့သူ တစ်ဦးပါ ။ မာဆေးလ် က ကျွန်တော့် အတွက်တော့ အိပ်မက် တစ်ခုပါပဲ ”
” ဒါ တစ်နေ့ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင်နေမိပါတယ် ။ ဘောလုံး အားကစား လောကမှာ ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့တွေ ကြိုတင် မသိနိုင်ကြဘူးလေ ” လို့ ဖိုဖာနား က သူ့ရဲ့ အိပ်မက်ကို ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ ဖိုဖာနားဟာ ခြေချင်းဝတ် ဒဏ််ရာ ရရှိနေခဲ့တဲ့ အတွက် လက်စတာ စီးတီး အသင်းအတွက်် ကစားပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲ အနားယူနေခဲ့ရပါတယ် ။ သူဟာ ဇန်နဝါရီလ အစောပိုင်း ကာလလောက်မှာတော့ ပြန်ကစားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ သိနေရပါတယ် ။
Previous Article ကလော့ပ် က သူ့ကစားသမားတွေ ကို အရမ်း ဂရုစိုက်တဲ့ နည်းပြမျိုးပါ #ဆိုလန်ကီ
Next Article လက်ရှိ အာဆင်နယ် အသင်းကို ဟူလီယာ လက်ထက် လီဗာပူး အသင်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ချီးကျူးလိုက်တဲ့ ကာရေဂါ